FaceApp ဟာ User Photo များကို အလွဲသုံးစားလုပ်နေသလား? – DigitalTimes
FaceApp ဟာ User Photo များကို အလွဲသုံးစားလုပ်နေသလား?
Facebook အပါအဝင် လူမှုကွန်ရက်များမှာ FaceApp နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို မျှဝေနေတာ Trend တစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။ FaceApp ကို လူတော်တော်များများသိနေပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ သူဟာ Android နဲ့ iOS အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ App ဖြစ်ပြီး ဓါတ်ပုံများမှ သင့်ရုပ်ပုံကို ငယ်သွားအောင် ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုပုံ ဖြစ်သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ သူဟာ ဉာဏ်ရည်တု နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အရမ်းကို သဘာဝကျပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူက ယောက်ျား ကနေ မိန်းမ ၊ မိန်းမ ကနေ ယောက်ျား အဖြစ်လည်း အသွင်ပြောင်းပေးပါတယ်။ ဆံပင်စတိုင်များ၊ အရောင်များကိုပါ ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။
ပြဿနာက သူ့ကို ရုရှား အခြေစိုက် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုက ဖန်တီးထားတာပါ။ အဲဒီအတွက် အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ ရှိလာပါတယ်။ အမေရိကန် လွှတ်တော်အမတ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ Chuck Schumer က FBI နဲ့ Federal Trade Commission (FTC) တို့အား FaceApp ဟာ သုံးစွဲသူ ဒေတာများကို အလွဲသုံးစားလုပ်သလားဆိုတာနဲ့ နိုင်ငံလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေသလားဆိုတာကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
FaceApp ဟာ iOS နဲ့ Android နှစ်မျိုးစလုံးမှာ လက်ရှိတွင် ဒေါင်းလုပ်လုပ်မှု အများဆုံး App တစ်ခု ဖြစ်နေပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက်များမှာလည်း သူနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများကို မျှဝေမှုဟာ အရမ်းကို မြင့်တက်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သုံးစွဲသူ ဒေတာများ လုံခြုံမှု မရှိဘူးလို့ ပြောနေကြပါတယ်။ FaceApp ဟာ သူဟာ ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ Users များရဲ့ ဖုန်းများမှ ဓါတ်ပုံများကို ရယူနေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေပါတယ်။
Ref : cnet, dailymail
တန်ဖိုးနည်း Android One ဖုန်း Nokia 2.2 ကို အမေရိကန်မှာ မိတ်ဆက်
Huawei က Hongmeng OS ဟာ Android ကို အစားထိုးဖို့ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြော